2 Igumbi Lokuhlala Lekhaya - I-Airbnb
2 Igumbi Lokuhlala Lekhaya
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Mercedes
U-Mercedes Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa endaweni yami yokuhlala ephansi, esendaweni yaseSherwood Forest eBaton Rouge. Uma usukuma endleleni, sicela upake imoto yakho ngaphansi kwendawo yokubeka izimoto ukuze uthole umthunzi futhi uvikeleke ezintweni. Njengesivakashi, uzongena njalo ngomnyango we-carport futhi usebenzise ikhodi yokufinyelela ukwenza kanjalo. Uma usungenile, indawo yasekhishini ikubingelele kuqala, futhi konke okunye kungokwakho ongakuhlola.
Indawo yasekhishini inesiqandisi, usinki, nomshini wokuwasha izitsha ongawusebenzisa. Kukhona nezitsha nezinto zokupheka ozisebenzisayo uma ufisa ukupheka ekhaya. Igumbi lokuwasha nalo litholakala ekhishini, futhi iwasha neyomisa kulula ukuyisebenzisa (ngingaphakamisa ukuthi usebenzise ukugeza ngokushesha ukuze ungalindi isikhathi eside elondolo lakho). Njengoba usuka ekhishini, indawo yokudlela iseduze nayo, ehlanganisa izihlalo eziyisithupha ezizungeze itafula kanye nezihlalo ezimbili eziphakeme eduze kwendawo yebha.
(*Kunomonakalo othile wamanzi endaweni yosilingi ngenhla kwetafula lokudlela kanye nezinye izindawo ekhishini, kodwa akukho ukukhathazeka: lezi zinto zizolungiswa maduze.)
Igumbi lokuphumula lilandelayo futhi liqukethe usofa, amatafula amabili asekupheleni, indawo yokulala, kanye ne-t.v. Manje i-t.v. ayihlakaniphile, kodwa inikeza inani elincane lamashaneli asendaweni futhi ungakwazi ukufinyelela izinhlelo zokusebenza ezithile zokuzijabulisa ngokuvula idivayisi/isidlali seDVD se-Sony. Kodwa ngithemba ukuthi uzochitha isikhathi uhlola futhi ujabulele i-Baton Rouge esikhundleni sokubuka umabonakude.
Njengoba wehla ngephasishi, kwesokunxele sakho kunegumbi lokulala lesivakashi elinombhede ogcwele netafula. Igumbi libuye libe nekhabethe elincane lokugcina izinto zakho. Ngaphesheya kwehholo kunendlu yokugezela enkulu, equkethe ubhavu kanye neshawa. Sicela ukhululeke ukusebenzisa noma yiziphi izinto zokugeza ezipakishwe esitsheni sikathayela.
Njengoba uqhubeka nokwehla ngephasishi, uzothola ikhabethe lelineni elingakwesokudla kanye nekhabethe lephasishi kwesokunxele. Ekhabetheni lephasishi, uzothola iziphanyeko eziningi ongazisebenzisa uma uzidinga endaweni yakho yokulala. Ngicela nje ukuthi uzibuyisele ephaseji ikhabetheni ngemva kokuhlala kwakho.
Ekugcineni, igumbi lokulala eliyinhloko liwumnyango wokugcina kwesokudla futhi liqukethe umbhede wendlovukazi, ikhabethe, okokugqoka okunesibuko, i-nightstand nesibani, kanye negumbi lokugezela elineshawa.
Noma ngingeke ngitholakale mathupha, ngicela ukhululeke ukungithumelela umlayezo nganoma yisiphi isikhathi ngemibuzo noma izinkathazo. Ngizobuyela kuwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
UMercedes Ungumbungazi ovelele